From Bystré to Rybnice sy Loukova - PetrPikora.com
PetrPikora.com on Janoary 27, 2018
Fijerin'ny ririnina amin'ny Bystro, rybnice sy Loukov 26.01.2018 amin'ny tolakandro.
Ny tanàna Haje nad Jizerou Faritany Semily District any amin'ny faritra Liberec, eo afovoany ny rohy eo amin'ny tanàna Semily sy Jilemnice, teo amoron 'ny Renirano Jizera (Grove teo amin'ny ankaviany banky, ny ampahany hafa eo ankavanana).
682 mponina miaina eto. Vao maraina, ny 1. 3. 2001, ilay tanàna nisy ny tatitra tsy tapaka 637 mponina, 302 tao an-tanànan'i Ambany Sytová, 154 ao an-tanàna ao an-tanàna dobo Loukov 125 sy 67 tao an-tanàna Haje nad Jizerou. Amin'izao fotoana izao, ny tanàna mitontaly maharitra nibodo 188 127 trano sy zohy fialofan'ny fialan-tsasatra.
Ny filazana voalohany momba ny tanàna dia avy amin'ny 1636.
Taloha, ny tanàna dia nantsoina hoe ampahany hafa amin'ny Pond.
Ny tanàna dia eo amin'ny làlana No. 292 eo anelanelan'i Semily sy Jilemnice. Ankoatra ny laharana eo an-toerana ao Háje, dia misy bisy lavitra lavitra ny fiatoana.
Eo ivelan'ny tanàna, any Horní Sytová, akaikin'ny faritr'i Dolní Sytová eo amin'ny sisiny atsinanan'ny tanàna Háje, misy ny fiarandalamby any amin'ny làlan'ny faritr'i Martinice Giant Mountains - Rokytnice.
Koa satria 1960 ao amin'ny tanàna an-toerana Folk trano famakiam-boky. Ny tanàna dia manana vondrona teatra Podhoran, TJ Sokol Lower Sytová sy fikambanana kely toy ny fikambanan'ny vehivavy beekeepers mpihaza, ny Vokovoko Mena.
Misy sekoly iray ao an-tanàna, ny sekoly ambaratonga fototra Krakonošova ary Loukova. Natao tao amin'ny 1775 ilay sekoly, satria nampianarina tao amin'ny Factory Loukov. Ny sekoly dia miasa ao amin'ny trano 1889 taloha, trano vaovao 1993 ary trano fanatanjahan-tena. Tao amin'ny 1993, ny sekoly ambaratonga voalohany dia niaraka tamin'ny kindergarten.
Ao amin'ny 1875 160 ankizy nanatrika ny sekoly avy amin'ny tanàna Rybnice, Loukov, Swift sy Haje nad Jizerou. Amin'izao fotoana izao 9 taona 7 sekoly ambaratonga voalohany miasa ao amin'ny kilasy (naoty tsiroaroa roa no mifandray amin'ny iraisana kilasy), nanatrika ny tokony ho 100 ankizy manatrika akanin-jaza manodidina 20 ankizy. Ny sekoly rehetra manompo ny fiaraha-monina, fa koa noho ny tanàna akaiky Bystrá nad Jizerou ary maro ireo mpianatra avy lavitra niraharaha toerana.
Ao Loukov dia misy ny paroasy katolika ao amin'ny Fiangonana ao St. Stanislava.
Misy efitrano telo an-tsitrapo ao amin'ny tanàna: SDH Dolní Sytová, SDH Rybnice sy SDH Loukov.
Ny Fire Brigade tao Rybnice, izay nanompo tany amin'ireo tanàna kelin'i Loukov sy Haje ihany koa, dia nanangana tamin'ny taona 1892. Niditra tao amin'ny Departemantan'ny Fire Fire ao Semily ilay kiraro. 15. 1900 dia natao tao Rybnice-Louka tamin'ny 12. toerana. Nisy brigade vaovao napetraka tao amin'ny 1904, ary novidina ny 1912 tamin'ny sambo 4-tanana, izay nanompo hatramin'ny 1947.
Nisy andian-jiolahimboto iray avy any Loukov niorina tamin'ny 1912.
Tamin'ny taona 1920-1938 afo ny dobo borigadin'ny nandray anjara tamin'ny fanorenana ny tsangambato ho an'ny lavo, dia nanorina ny vaovao sy ny afo firehouse fitoeran-tsoliky akaikin'i Janata. Taona fiangonana tamin'ny 1929 amin'ny kamory County Kongresy.
Ao amin'ny 1947, ny PS sy ny 8 voalohany dia nividy tao Stratílek. 1970 dia nividy GAZ 69. Ao amin'ny 1991, novidina ny PS sy ny serialita PS 12, anisan'izany ny chassis covered.
Nisy tafo afo vaovao napetraka tao amin'ny 1953. Nandritra ny taona 1963 sy 1978, dia nisy fanampiana fanampiny ho an'ny hetsika ara-kolontsaina natsangana ho an'ny fitaovam-piadiana. Nandritra ny taona 1985-1986 dia nisy tafika vaovao sy fiara iray natsangana.
Tao amin'ny 1960, nanambatra ny ekipa fifaninanana voalohany ny choix.
Ny antoko mpihira sy ny fampandrosoana Nanjary manan-karena ara-kolontsaina asa. Ihany koa dia mandray anjara ao amin'ny beautification tao an-tanàna, toy ny fananganana ny tara lalana an-dobo, fikojakojana ny lalana sy ny toeram-bahoaka, fanorenana fencing ny toeram-pandevenana, nanamboatra ireo sary vongana tao an-tanàna, fanorenana ny fiara fitateram-bahoaka miandry efitra sy ny fametrahana nitaredretra, manampy amin'ny fanorenana sy fikojakojana ny monisipaly rano ao amin'ny taona 1973-1978 sns .
Tanàna akaiky sy tanàna kely
Benešov u Semil any andrefana
Bystra nad Jizerou any atsimo
Peřimov sy Víchová nad Jizerou any atsinanana
Roprachtice any ambadiky ny havoana any avaratra
Loukov dia fonenana, anisan'ny tanàna Háje nad Jizerou ao amin'ny distrikan'i Semily. Ny manodidina ny 1 km avaratra andrefan'i Hájů nad Jizerou. Misy lalana II / 292. Misy adiresy 63 voasoratra. Mipetraka eto ny mponina 136.
Misy paroasy katolika ao amin'ny fiangonan'i St Stanislav avy any Krakow, misy fasana. Misy ihany koa ny toeran'ny hôpitaly manam-pahefana Hájů nad Jizerou (any amin'ny sekoly ambaratonga fototra).
Ao amin'ny faritany ihany koa dia mpirotsaka an-tsitrapo mpilatsaka an-tsitrapo (misy SDHs roa hafa ao Rybnice sy Dolní Sytová), izay noforonina tao amin'ny 1912 avy ao amin'ny Pilsen Choir.
Loukov dia miorina eo amin'ny faritry ny Cadastral 5,231556 km2 Pond.
Church of St. Stanislava
Fianakaviana iraisana amin'i Ar. fasana, lakroa, ary fasana
Sekoly ambaratonga fototra sy laharan-mahantra No. 35
Statue de Saint Jana Nepomucký
Chapel ambonin 'ny fiangonan'i St. Stanislava, eo anelanelan'ny 32 sy 15
Trano fonenan'ny Harcub (No. 9)
Rybnice dia fonenana, anisan'ny tanàna Háje nad Jizerou any amin'ny distrikan'i Semily. Ny manodidina ny 2 km any andrefan'i Hájů nad Jizerou. Misy lalana II / 292. Misy adiresy 80 voasoratra. Mipetraka eto ny mponina 146.
Ao amin'ny faritany dia misy mpirotsaka an-tsitrapo ihany koa, izay naorina tao 1892 (misy SDH hafa ao Dolní Sytová sy Loukov).
Pond ihany koa ny anaran'ny faritra Cadastral 5,231556 km2. Ao amin'ny faritanin'i Rybnice, Loukov no misy azy.
Ny tanàna Benešov u Semil dia ao amin'ny distrikan'i Semily, faritra Liberec. Mipetraka eto ny mponin'i 873.
Niorina ho tanàna ambanivohitry ny ala ny tanàna, tamin'ny tapany faharoa tamin'ny 13. taona Beneš avy amin'ny Vartemberk. Ny filazalazana voasoratra voalohany momba ny tanàna dia avy amin'ny 1411, raha ny an'ny tanàna dia an'ny Semil.
Ny lovam-paharetan'ny SDH, faritra ao Podolí, kianja fanaovana fanatanjahan-tena, kianja fanaovana tennis.
Sarivongan'ny Mpomba an'i Jan Hus avy ao amin'ny 1901 eo afovoan'ny tanàna, akaikin'ny fasana
Stone Cross avy amin'ny 1788
Tetezana hazo sarotra vita amin'ny Jizeru
Karazan'ny nikela roa avy amin'ny 19. taonjato
Country house No. 105
Ny pub no. 24
Tanànan-tranonkala 4, 25, 73, 107, 115
Ny faritr'ity vohitra ity dia iray amin'ireo tranonkala minerôka manan-danja indrindra ao amin'ny Geopark Bohemian Paradise. Ny vato ao an-toerana dia basenika andesites, na melafyres, avy amin'ny renirano ambany ambany izay mamorona vovoka toy ny vatan'ny olona ao amin'ny faritra famokarana pejin'ny Peroviana. Ao amin'ny lavaka, tsefatsefaky ary amygdala melaphyres hita amphibole, aragonite sy ny delessit, dia misy miseho dolomite, hematite, oniksa, agata, oniksa, calcite, sy ny phillipsite ametysta.
BenesovBenešov u SemilSwiftdji mavicdrônadrônaHaje nad JizeroukvadroptéralitchiLoukovphantomphantom 3phantom 4Rybniceavy any ambony